सरकारले देखाउन थाल्यो काम – TajaNepal
Home /Blog/सरकारले देखाउन थाल्यो काम
काठमाडौं । वामपन्थी प्रगतिशील देशभक्तहरुको नेतृत्वको सरकारले देश जनता र राष्ट्रको हितमा गर्ने कामको थालनी गरेको छ । भ्रष्टाचार कमिशन र आर्थिक अनियमितताको संरक्षण गरेको विगतको व्यूरोकेसीलाई शिक्षा दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयका सचिवहरु लाङ्गलिङ्ग बनाउँदा अपमानवोध गरेका माओवादी मन्त्रीहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड मार्फत असन्तुष्टि प्रकट गरेको फल प्रहरी संगठनका दुई आईजीपीको नियुक्तिबाट बदला लिए । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गृहको कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउन गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको लामो परामर्श पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा गरेका छन् ।
कालो बजार नियन्त्रण विचौलियामाथि प्रहार गर्ने तयारीमा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय लागेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरुको साथमा सरकारले बजार अनुगमन गर्ने बताइरहदा विदेशी चिनी आयत घटाएर स्वदेशको चिनीलाई प्रोत्साहन गर्न चिनीमा लाग्दै आएको भन्सारदर ३० प्रतिशत पु¥याउँदा उपभोक्ताको हित गरेको छैन । किसानको उखु प्रयोग गर्ने तर भुक्तानी समयमा नदिने उखुमिल मालिकहरुलाई चेतावनी दिदा किसानले डुवेको पैसा पाएका छन् । आयल निगमले डलरमा भित्र्याएको इन्धन नेपालबाट भारतमा तस्करी भईरहदा स्थानीय प्रशासन, सीमा प्रहरीले सघाइरहेका छन् । सरकारको वदनामी भएको पाटो यही हो ।
सरकारले आफैलाई विकासको ढाँचा प्राविधिक रुपमा देखाउने राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षमा डा. पुष्प कंडेल सहित पाँच सदस्य नियुक्ति गर्दा समाजमा चर्चित अनुभवी नाम चलेकालाई चिनेन । एमालेका आर्थिक आयोगका संयोजक डा. पुष्प कंडेल बाहेकका सदस्यहरु सबै नयाँ छन् उनीहरुको नयाँ जोश जाँगरले राज्यलाई विकास पथमा लैजानका लागि कति योगदान पु¥याउँछ छिट्टै देखिने छ । जनताले अदालती रुपमा काउसो देखेका न्यायिक क्षेत्रको अत्याचारमाथि राज्यले प्रहार गरोस भन्ने चाहेको छ । अपराधीले छुट पाउने, पीडितले न्याय नपाउने प्रवृत्तिको अन्तका लागि सर्वोच्च अदालत शुद्ध हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
अदालतमै विदेशी डलर भित्र्याएर मस्ती गरेकाहरुको पर्दाफास यस पटक भएको छ । कानुन मन्त्रीले न्यायाधिसहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका छन् । राजधानीका सडकहरु अलपत्र पार्ने भूमाफीया र विचौलियाका दलालहरु छन् । बेला बखत मानव अधिकारको नाममा विदेशी उक्साहटमा उफ्रिनेहरुद्वारा रकम लिने विदेशी डलर संचालन संस्थाकोे रेकी गर्न सरकाले शुरुवात गरेको छ । धर्म परिवर्तन गर्न लगाउने संस्थाका संचालकहरुको निगरानी शुरु भएको छ । भूकम्पले थिलोथिलो परेका स्थान सुध्रिएका छैनन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण अलमलमा छ ।
यातायात क्षेत्रको दादागिरीको अन्त गर्न सफल सरकारले वैदेशीक सम्बन्ध विस्तारमा पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ । उत्तरको चीन भन्दा दक्षिणको भारत नेपालका निम्ति हेपाह छ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकास देख्न नचाहेको भारतले आयोजना हड्पेर राख्ने गरेको छ । नेपाल भारत इपिजी बैठकमा भारतसँग भएका पुराना सन्धी सम्झौताको समय अनुसार पुनरावलोकन गर्नु पर्ने कुरा उठेको छ । नेपालमा शक्तिशाली सरकार बन्दा भारतले विगतको जस्तो दादागिरी देखाउने आँट गरेन । बरु चाकडी नै गरेको छ । उसको यो हेपाह चरित्र शुरु गर्ने खेल हुन सक्छ । भारतकै आदेशमा चल्ने राजनीति नेपालमा गर्ने राजपा जस्ता शक्तिहरु संविधानको विषय उठाउँछन् । मधेसका जनतालाई अंगीकृत नागरिकहरुको दादागिरी रुचीकार छैन । त्यही कारण मधेसका मद्दामा मधेसनै अपरिचित हुन थालेको छ । यो बेला सरकारले संसदको बजेट अधिवेशनको तयारी सँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटको व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको एकमना सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट र विकासे अवधारणाको सन्देश नीति तथा कार्यक्रममा आउने छ ।